I-Apple TV 4K ka-2017 iyeka ukuthengiswa kodwa isizukulwane se-4 se-Apple TV sihlala | Ndisuka mac
Uninzi lwethu lulindelwe ngenxa yamarhe awahlukeneyo asasazeke ngokunxulumene nokuhlaziywa kwe-Apple TV, iApple iboniswe izolo emva kwemini I-4th Gen Apple TV 6K, I-Apple TV leyo gcina uyilo olufanayo kodwa loo nto ivela kwisandla seSiri kude, okanye njengoko iApple iyibiza kwamanye amazwe iApple Remote.
Isizukulwane esitsha sesi-6 se-Apple TV sele sifikile kwintengiso buyisela iApple TV 4K, imodeli yesihlanu yesiqhelo ukuba iApple isungule ngo-2017, njengoko inkampani esekwe eCupertino iqhubeka nokugcina imodeli eyayisungule ngo-2015 iyathengiswa.
Isizukulwana sesi-6 se-Apple TV sinjalo ilawulwa yiprosesa ye-A12Ngelixa isizukulwana esidlulileyo, iprosesa yayiyi-A10X, efanayo naleyo sinokuyifumana kwisizukulwana sesi-2 sePad Pro. Omnye umahluko obalulekileyo ufumaneka kwizibuko lokuhamba, kuba kwisizukulwana esitsha, eli zibuko linjalo Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi 2.1.
Ukuhamba okuphosileyo, iApple ayilinciphisanga ixabiso lesizukulwana sesi-5 se-Apple TV, kodwa ikhethile Qhubeka uthengise imodeli ebisoloko ikwintengiso yeminyaka emi-6Isizukulwane se-4 se-Apple TV, imodeli elawulwa yiprosesa ye-A8, iprosesa efanayo ngoku efumaneka kwi-iPhone 6, i-terminal eyekile ukufumana iinguqulelo ezintsha ze-iOS kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Nangona kunjalo, ngoku ifumaneka kuphela Inguqulelo engama-32 GB kuphela kwaye iya kubandakanya iSiri Remote entsha. Ixabiso le-Apple TV HD, imodeli yesizukulwane sesi-4 zii-euro ezili-159, ngelixa i-Apple TV 4K kwinguqu yayo engama-32 GB ixabisa kuphela i-euro ezingama-40, ezingama-199 zeerandi. Inguqulelo ye-64 GB inexabiso nge-219 euro.
Kwezi veki zimbalwa zizayo, iivenkile ezininzi, zombini kwi-Intanethi kunye nasemzimbeni, ziya kuzama lahla iApple TV 4K, imodeli yesihlanu, ngoko ke ingalixesha elifanelekileyo ukuba uceba ukuvuselela okanye ukuqala iApple TV, ukusukela kwimodeli yesizukulwane sesi-5, ngexabiso elikuyo, ayinangqondo ukuyithenga ngo-2021.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple TV 4K ka-2017 iyeka ukuthengiswa kodwa isizukulwane se-4 se-Apple TV sihleli